Usenkingeni umgadli ozilolonga ne-Chiefs ngaphandle kwemvume yeqembu lakhe | News24
Usenkingeni umgadli ozilolonga ne-Chiefs ngaphandle kwemvume yeqembu lakhe
Johannesburg – Iqembu laseTanzania i-Simba SC alijabule neze ngomgadli wabo u-Ibrahim Ajib okusolakala ukuthi uzilolonga ne-Kaizer Chiefs.
Ngokwemibiko ye-The Tanzanian Citizen, lo mdlali uzochitha izinsuku eziyishumi ezilolonga naMakhosi lapho umqeqeshi uSteve Komphela ezokwazi ukubehlulela khona kodwa lo mgadli akazange atshele iqembu lakhe lasekhaya ngalolu hambo.
OLUNYE UDABA:Ukushaqeka kushona umdlali oquleke enkundleni kudlalwa
Lezi zindaba zilicasule kakhulu iqembu iSimba SC ngoba akekho oke waxhumana nabo ngalokhu. Usihlalo waleli qembu u-Evans Aveva, uthe ziningi izinqubo ezingazange zilandelwengoba abazange basithole isimemo esicela lo mgadli.
Amakhosi azoba matasa kakhulu kele sizini elandelayo njengoba befuna ukuvuselela isimilo sabo ngemuva kokungadlali kahle kule sizini ephelayo.